मलेसियामा हुने नेपाली श्रमिकहरुको लागि दुखद् खबर (सबै सजक रहन सेयर गराै) - Onlines Time
मलेसियामा हुने नेपाली श्रमिकहरुको लागि दुखद् खबर (सबै सजक रहन सेयर गराै)
September 10, 2021 September 10, 2021 onlinestimeLeaveaComment on मलेसियामा हुने नेपाली श्रमिकहरुको लागि दुखद् खबर (सबै सजक रहन सेयर गराै)
नेपाली श्रमिकहरुको लागि आकर्षक रोजगारी गन्तव्य देश मानिएको मलेसिया लामो समयदेखि कोरोना महामारीसँग जुधिरहेको छ । त्यहाँ दिनप्रतिदिन कोरोनाको दर बढ्दै गएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यामले जनाएका छन् ।
मलेसियामा दैनिक २० हजार भन्दा बढी कोरोनाका संक्रमित थपिने गरेका छन् । आज एकै दिन २४ हजार ५९९ कोरोनाका नयाँ संक्रमित थपिएका छन् । एकै दिन यति धेरै संक्रमित देखिएको यो पहिलो पटक हो ।
त्यहाँको स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार नयाँ संक्रमितमध्ये ८० प्रतिशत कोरोनाको खोप लाउँदै नलाएका तथा पूर्ण मात्रा नलगाएकाहरु छन् । मलेसियाका स्वास्थ्य महानिर्देशक तान श्री नूर हिशामले नयाँ संक्रमितहरुमध्ये ९७ प्रतिशतमा कुनै लक्षण नदेखिएको बताउनुभएको छ ।
यस्तै मलेसियामा हिजो कोरोनाका कारण २ सय ६५ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । जसमध्ये ४६ जना गैर मलेसियन रहेको जनाइएको छ । सेलांगोरमा मात्रै एक सय ५ जनाको ज्यान गएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्म मलेसियामा १४ हजार ८ सय १८ जनाले कोरोनाका कारण ज्यान गुमाइसकेका छन् ।
मलेसियाले कोरोनाको उच्च जोखिम रहेको भन्दै नेपालसहित बंगलादेश, भारत, पाकिस्तान श्रीलंकाबाटका उडान प्रतिबन्ध लगाएको छ । यी देशका उडान मलेसियामा ट्रान्जिट भएर पनि जान पाउँदैनन् । तर कूटनीतिक नियोगका कर्मचारी तथा मलेसियन नागरिकहरुले भने स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरि प्रवेश गर्न पाउँछन् ।
मलेसियामा अहिले कोरोना संक्रमणको दर हेरेर विभिन्न क्षेत्रअनुसार प्रतिबन्धमा कडाइ वा खुकुलो बनाइएको छ । मलेसियामा रहेको नेपाली दूतावासले त्यहाँ रहेका नेपालीलाई स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्न आग्रह गरेको छ ।
८१ वर्षीय बुढालाई धो का दिएर फ रार भइन् श्रीमती,घरको सम्पत्ति पनि यसरी लु टेर फ रार (भिडियो हेर्नुस्)
त्यो दिन के भएको थियो संखुवासभा ह-त्याकाण्ड ! बाच्न सफल भएका बुवाको बयान यस्तो, एकै रात ६ जना सकिए
के तपाईं मलेसियादेखि नेपाल फर्किदैँ हुनुहुन्छ ? यि निम्न कुराहरूमा ध्यान दिनुहोस्।
June 28, 2021 June 28, 2021 onlinestime
घ,टनाको १८ दिन पछि बल्ल कुकुर परिचालन गरियो पत्रकार पुगे लगतै कहाँ बाट आयो कुकुर Tanahu News
December 24, 2020 December 24, 2020 onlinestime
Gyanendra Shahi को समूहलाई सुर्खेतमा यसरी भएको थियो आ क्र मण, १२ जनाले एउटैलाई कु टे कसैले ब चाएनन्, (भिडियो हेर्नुहोस)
June 12, 2021 onlinestime